यी हुन् कोभिड-१९ खोपबारे जान्नैपर्ने १० तथ्यहरु - South Asia Check
Injina Panthi / शुक्रबार, फाल्गुण ७, २०७७
काेभिसिल्ड खाेपकाे भायल देखाउँदै काठमाडाैँकाे सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तस्बिरहरु: दीपक अधिकारी
नेपाल सरकारले माघ १४ बाट विभिन्न चरणमा लगाउन सुरु गरेको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमबारे मानिसहरूमा विभिन्न जिज्ञासा र संशय रहेको पाइन्छ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित एक समाचार अनुसार खोप ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खोप खरिद सहज गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३ का केही प्रावधान लागु नहुने निर्णय गरेको छ। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्नका लागि त्यसो गरिएको हो । सरकारले ४ अमेरिकी डलरका दरमा २० लाख डोज खोप खरिद गर्ने जनाएको छ।
काेभिसिल्ड खाेप लगाउन काठमाडाैँकाे सिभिल अस्पतालमा माघ २८ गते लामबद्ध हुँदै
कोभ्याक्सबाट पाइने खोप चरणवद्ध रुपमा देशहरूमा भित्रिन्छन्। यसबाट कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख नेपालीलाई खाेप उपलब्ध हुने बताइएको छ।
डा श्यामराज उप्रेती भन्छन्, “कोभ्याक्स संयन्त्रले जुन देशमा जुन चलाउन सजिलो हुन्छ, त्यो खोप दिन्छ। अहिलेसम्म कोभिसिल्ड नै दिने कुरा भइरहेको छ। २२ लाख मात्रा चाहिँ फेब्रुअरीको अन्तिम वा मार्चको सुरुमा आउँछ।”
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कन्भरसेसन इन् साइन्स नामक कार्यक्रममा डा. क्याथरिन ओ ब्रायनले यो खोपले कति समय काम गर्छ भन्ने कुरा अध्ययन भइरहेको जनाउँदै हालसम्म त्यसको परिणाम नआएकोले यकिनका साथ भन्न नसकिने बताएकी छन्। “यो खोपले प्रदान गर्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले कति समय काम गर्छ र फेरि कोभिड-१९ ले संक्रमण हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भनिन् ।
डा. ब्रायन भन्छिन्, “अहिले खोप सबै उमेर समूहको लागि बनिनसकेको र सबैका लागि खोप उपलब्ध नभएकाले सावधानी अपनाउनुपर्छ।”
किन बारम्बार हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि ? के हुन् समाधानका उपाय ? नेपाल आयल निगमले दुई साताभित्रै दुई पटक पेट्रोल, डिजेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ । गत फागुन ४ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकोमा १३ दिनपछि नै फागुन १७ गते मूल्यवृद्धि गरिएको थियो । ... विस्तारमा